यस्ता छन नविना लामालाई सोधिएका ७२ प्रश्न – SawalNepal
यस्ता छन नविना लामालाई सोधिएका ७२ प्रश्न
By सवालनेपाल	 प्रकाशित समय २०७४, २१ पुष शुक्रबार १४:५३
काठमाडौं: ठिक दुई बर्ष अघि नयाँ पेजको अन्तरवार्तामा नविना लामाले भनेकी थिइन्,‘मेरो सपना एमालेको पार्टी अध्यक्ष र यो मुलुकको प्रधानमन्त्री बन्ने हो ।’ उतिखेर अनेरास्ववियुको २२ औँ सम्मेलनको रापताप चलिरहेको थियो । अध्यक्ष पदको उम्मेदवार थिइन्, नविना । स्वभाविक रुपमा चुनाव ताका योजना र सपना अलि उपल्लो स्तरकै हुन्छ, चाहे त्यो किन पुरा गर्न नसकिने होस् । काभ्रेकोशी पारीको सामान्य तामाङ परिवारमा जन्मिएकी नविना मुलुकको सबैभन्दा ठुलो विद्यार्थी संगठनको अध्यक्ष वनिन् ।
अब उनको कार्यकाल सकिन लागेको छ । गएको दुई बर्ष उनको पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री बन्ने सपनाको कति सहयोगी बन्न सक्यो ? त्यो हिसाबकिताब त नविनासँगै होला । फेरि दुई बर्षपछि नविनालाई उही प्रश्न सोध्यौं, ‘तपाईको सपना के हो ?’ नविनाको जवाफ उही छ,‘अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री ।’ हुन नसक्नु एउटा कुरा हो । गन्तव्यमा पुग्न नसक्नु एउटा कुरा हो । तर, सपना देखेर दौडीरहनु धेरै महत्वपूर्ण हो । नविना भन्छिन्,‘सपनाले मान्छेलाई अघि बढ्न घचघचाई रहन्छ ।’ केहीदिन अघि नविना उस्तै उत्साही र खुसी थिइन् । एमालेको समानुपातिक तर्फको प्रतिनिधिसभा सदस्यको सूचीमा रहेका नविनालाई घरीघरी बधाईका फोन आइरहेको थियो । यो सपना बोकेकी नविनालाई हेर्ने मान्छेको दृष्टिकोण आ–आफ्नै छ । होलान् । तर, आफ्नै नजरमा नविना के हो ? को हो ? उनको स्वभाव, शैली, सपना र अभिरुची बारेमा निकै लामो अन्तरवार्ता गर्यौं । यो अन्तरवार्ताको क्रममा नविना कहिले भावुक बनिन्, कहिले उत्साहित । अन्तरवार्तामा उनी निर्दोष शैलीमा इमानदारिताको साथ प्रस्तुत भइन् ।
एक्कासि किन जाने भए ओली बैंकक, यस्तो छ कारण
नेपालले चिन सँग सम्बन्ध राखेपछी भारतलाई यसरी पर्‍यो आपत!